Ndepụta gị maka Ememme Teknụzụ Na-aga nke Ọma! | Martech Zone
Na ngwụcha izu a gara aga, anyị agbaala nke mbụ Egwu, ahia & Tech Midwest Omume (#MTMW) - ihe omume ebe a na Indianapolis iji nweta ego maka Leukemia na Lymphoma Society na ebe nchekwa nke papa m onye anyị tufuru n’afọ gara aga. Nke a bụ ihe izizi m tinyegoro ya mere ọ jọgburu onwe ya. Agbanyeghị, ọ gafere na enweghị nsogbu na achọrọ m inye ndị ọzọ nghọta maka ihe kpatara ọ jiri gaa nke ọma.
Anyị kpebiri ime a ememme teknụzụ karia onu ogugu, ogbako na-agwụ ike ka ndi mmadu nwee ike izu ike ma nwee mmekorita ya na ibe ha karia ka ike gwu ha site na ike ojoo. Ndị bịara abịa nwere ike ịnwe otu oge na ndị nkwado iji nyochaa onyinye ha… mana na-enweghị okwu.
Charity - n'agbanyeghị mmemme gị, ị nwere ike ime nke ọma site n'ịhụ na ụfọdụ sitere na ihe omume ahụ gaa na ọrụ ebere. N'okwu anyị, anyị nyere 100% nke ihe ha retara nye Leukemia & Lymphoma Society. Ọbụna ndị bịara anyị bidoro atụmatụ ha ịkpakọba ego na nke anyị! Daalụ # run4doug
haziri nzukọ - inwe ọrụ ebere mere ka anyị nwee ike ịpụ ma chọta ndị na-akwado maka akara ngosi, kaadị onyinye, ndị ọrụ, nri, na egwu. Anyị na ndị na-akwado ọrụ rụkọ ọrụ iji hụ otu anyị nwere ike isi jigide ngwugwu na ọnụ ala dị ala site na mbọ anyị na ha gbara - ma ọ rụ ọrụ!
Ebe - ebe kwesiri ekwesi di oke egwu. Anyị họọrọ Ntughari na Indianapolis - a kediegwu centerpiece nke a trendy ngalaba nke obodo na-enweta site n'ebe nile - o nwere a biya ubi, a mmanya na a obi ụtọ ụlọ - niile na nkebi na ụda na-agba ọsọ music. Ndị ọrụ nọ ebe ahụ iji mee ka ọ nwee ihe ịga nke ọma ma gafere atụmanya niile.
Mmekọrịta ọhaneze - Dittoe PRna-arụsi ọrụ ike maka ọnwa iji jikọọ na telivishọn mpaghara, redio, akwụkwọ akụkọ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ịntanetị iji kwalite ihe omume ahụ. Ihe omume ahụ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma n'ihi mbọ ha!
Social Media - anyị tinyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla na saịtị anyị na ntanetị ọhaneze na-elekọta mmadụ iji gaa n'ihu na-adọta ndị mmadụ ịbịa. Anyị na-akpọsa na Facebook na Twitter iji mee ka ndị mmadụ mara. Anyị na ya rụkọrọ ọrụ Atụmatụ saịtị, ndị ọkachamara na mpaghara ọchụchọ ndị na-akwalite ihe omume ahụ na mmekọrịta anyị na ahịa redio gosipụtara.
Music - Egwú dị iche iche dị iche iche… sitere na Badlu na Bluegrass na Ndị mmadụ rue Jazz. Ọbụna anyị na-agba ọsọ egwu egwu dị elu na ụlọ ọrụ teknụzụ anyị site na N'okpuru.
omume Management - Steve Gerardi bụ onye na-akwalite ihe omume mpaghara ma mara ihe niile chọrọ ime atụmatụ ma gbuo ya. Ọ dịghị ihe ọ bụla dị ịtụnanya n'oge atụmatụ na mmechi nke ihe omume ahụ.
Ndebanye aha n'ịntanetị - Ndị bịaranụ nwere ike ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị ma anyị nwere ndepụta ndị ọbịa n'ọnụ ụzọ ámá, yana iPad ebe ha nwere ike ịkwụ ụgwọ site na kaadị akwụmụgwọ. Kama tiketi, anyị kesara ụyọkọ nkwojiaka nwere akara ebe ndi nkwado, ndi okenye, umuaka na ndi otu ndi ozo nwere agba ha maka njirimara di nfe.
Ihe akara - Anyị chọrọ ihe nkwado, eserese, ihe mkpuchi uhie maka foto, ọkọlọtọ na akwụkwọ ọkwa… ma soro ụlọ ọrụ dị egwu rụkọọ ọrụ. PERQ iji nweta ndị ahụ.
nwa anụmanụ - PERQ kenyere ha FATWIN kiosks na mmemme ebe ndị ọ bụla bịara nwere ike ịdebanye aha ma merie ihe nrite. Nke a na-abawanye okporo ụzọ ụkwụ na ụlọ ọrụ teknụzụ anyị na ndị bịara anyị niile ji ihe nrite laa n'ụlọ!
-ada - Apụghị m imesi otú ụda ahụ dịruru mkpa. Site na itule egwu na egwu ndi mmadu, onye obula nwere ihe gbawara na mmemme ahu n’enweghi oke olu. Ndị mmadụ nwere ike inwe mkparịta ụka ma ka na-anụ nnukwu onyinye ịtụnanya na-egwu n'azụ. Halllọ ọrụ na-ahụ maka teknụzụ gbadara ka ndị na-akwado ya wee nwekwuo uche. Pyramid Sound Work na-eduzi Mike Ottinger duru ụda ahụ ma ọ dị ịtụnanya!
T-Chiefs - Ndị Art Press haziri T-Shirt ncheta maka ememe a na-ere (ma ị ka nwere ike ịtụ ha n'onlinentanet ebe a ruo mgbe ọnwa nke iri). Ndị ọrụ nwere t-shirts nwere STAFF ebipụta n'azụ. Presslọ ọrụ Art Press rụkwara tebụl ahịa na-ere ahịa nke nabatara kaadị akwụmụgwọ na ọbụnadị wuo ebe ịtụ ahịa n'ịntanetị ka ndị folks nwee ike ịzụta uwe elu ma emechaa!
Nri na Ṅụọ - iji gosi ọdịiche dị na menu ndị German dị ịtụnanya, anyị debara aha dị ịtụnanya obodo New York Pizzeria ịkwụba ụgbọala nri ha n'ọnụ ụzọ ihe omume ahụ. Venlọ egwuregwu abụọ ahụ kwuru na ha mere ọmarịcha ahịa niile… ma igwe mmadụ ahụ agụụ na-agụ! Ọ bụ ezie na akụkụ nke ebe mgbakọ ahụ bụ mmanya, anyị nwekwara ụlọ bọọlụ dị ma ọ bụrụ na ndị folks enweghị ntụsara ahụ na mmanya.
Ebe nkwụ ụgwọ - Onye ọ bụla nwere ekwentị na ha niile chọrọ ebubo. Daalụ maka anyị, Ike nyefere pallet nke chaja dị ịtụnanya dị ịtụnanya ma onye ọ bụla nwere ike ịse foto ma kesaa ha ụbọchị niile! Batrị nwụrụ anwụ pụtara na enweghị nkesa !!!
Vidiyo na Foto - anyi webatara ihe omume kacha mma foto na steeti, Paul D'Andrea. Anyị nwere Aịzik Daniel, otu emezu videographer ndị ọkachamara na ịkọ akụkọ na-abịa na otu, nchịkọta igwefoto na GoPros, na ike na-enweghị nkwụsị. (Vidio na-enweta nbudata ma gwakọta ya mgbe m na-ede ihe a).
Gịnị Ka Anyị Na-atụfu?
Mgbe ọ bụ nnukwu ihe omume, ekwenyere m na anyị atụfuru ihe ole na ole:
Programs - Obere ihe omume gaara abụrụ ezigbo ndị nnabata, na-enye njikọ dị mkpa, nkọwa nke ndị na-akwado ha, yana usoro oge maka ha!
Nleta Ndị Nkwado - Echere m na ụdị Bingo ebe ndị folks ga-enweta stampụ site na onye nkwado ọ bụla iji kpọọ FATWIN gaara eme ka okporo ụzọ ndị ọzọ banye n'ụlọ ntu teknụzụ ọ bụla.
Naanị ihe edetu - a họpụtara m maka Nwoke na Nwanyi nke Afọ mkpọsa na ị ka nwere ike inye aka site na Mee 10th!
Tags: mmanyaodori chajaọrụ eberedittoe prọṅụṅụomumenjikwa ihe omumeomume facebookememmendepụta nke ememmenrimike ottingerMusicprmmekọrịta ọhanezeụda pyramid na-arụ ọrụelekọta mmadụ mgbasa ozinkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya-adasteve gerardiuwe elut-shirtsebe mgbakọ
Key Strategies maka Email Marketing